Warshad Bilad Shiinaha iyo soosaarayaasha | Kingtai
Guulaha dhabta ah waa in la siiyaa aqoonsiga ay mudan yihiin. Billadahayaga tayada sare leh ee dhaldhalaalka ah ayaa dhaha wax aad uga badan inta la soo saaray, ee ka baxsan beddelaadda shelf.
Kudar nashqaddaada, nambarka isku xigxiga iyo qoraalka xuska biladaha si loo hubiyo in mid kastaa uu ahaado hadiyad gaar ah oo gaar ah.
Waxaa lagu heli karaa qaab kasta, cabir ama nashqad kasta oo loox looxa ikhtiyaariga ah loogu hagaajin karo xarig qoorta, iyo dahab, qalin iyo naxaas dhammaad ah.
Biladani waxay kufiican tahay xarfaha qaabka loo jaro ama loo naqshadeeyo cabbir ahaan. Waxaa loo isticmaali karaa dhiirrigelinta shirkadda, isboortiga waxaana loo isticmaali karaa hadiyad xusuus ah oo loogu talagalay asxaabta, taas oo muujineysa qiimaha sharafta leh ee aqoonsiga muuqaalka.
Fursadaha kordhinta dheeraadka ah waxaa sidoo kale ku jiri kara in lagu daro dhaldhalaalka jilicsan ee dhalaalaya, warqad ku dhejisan, daabacaadda dhijitaalka ah, rinjiyeynta iyo epoxy.
Biladaha Daawada Zinc waxay bixiyaan dabacsanaanta naqshadeynta cajiibka ah iyada oo ay ugu wacan tahay habka wax isku duro ee duritaanka, halka maadada lafteedu ay tahay mid aad u waari karta oo siineysa biladahan tayo dhammeyn. Sida billadaha dhaldhalaalka caadiga ah, beddelka daawaha zinc waxaa ku jiri kara illaa afar midab oo dhaldhalaal ah loona qaabeyn karo qaab kasta.
Waqtiga wax soosaarka: 10-15 maalmood oo shaqo kadib oggolaanshaha farshaxanka.
SOFT CAGAAR MADAXA
Billadaha dhaldhalaalka jilicsan ayaa matalaya billaddeenna dhaldhalaalka ugu dhaqaalaha badan. Waxaa laga soo saaray bir shaabadaysan ama bir ah oo leh dhaldhalaal jilicsan oo jilicsan waxaana ka mid ah xarkaha dhoobada epoxy, kaas oo ka ilaaliya bilada xoqidda isla markaana siisa habsami u dhammayn.
Naqshadeyntaada caadadu waxay ka koobnaan kartaa illaa afar midab oo waxaa lagu shaabadeyn karaa qaab kasta oo leh fursadaha dahab, qalin, naxaas ah ama nikeel madow dhammaad ah. Tirada ugu yar ee la dalbado waa 50 kumbiyuutar.
MEDALS CADAAN AH
Biladahan shaabadaysan waxaa ka buuxa dhaldhalaalka dhaldhalaalka adag ee synthetic vitreous, iyaga oo siinaya cimri dherer aan la dhaafi karin. Si ka duwan billadaha dhaldhalaalka jilicsan, looma baahna daahan epoxy, sidaa darteed dhaldhalaalka ayaa loogu daadinayaa dusha sare ee biraha.
Naqshadeyntaada caadadu waxay ka koobnaan kartaa illaa afar midab oo waxaa lagu shaabadeyn karaa qaab kasta oo leh fursadaha dahab, qalin, naxaas ah ama nikeel madow dhammaad ah. Tirada ugu yar ee la dalbado waa kaliya 25 kumbiyuutar.
Biladaha Daawada Zinc waxay bixiyaan dabacsanaanta naqshadeynta cajiibka ah iyada oo ay ugu wacan tahay habka wax isku duro ee duritaanka, halka maadada lafteedu ay tahay mid aad u waari karta oo siineysa billadahan tayo dhammeystiran.
Boqolkiiba tiro aad u badan oo ah biladaha dhaldhalaalka waa laba-cabbir, si kastaba ha noqotee marka nashqad u baahan tahay saddex-cabbir ama shaqo lakabyo badan oo laba-lakab ah leh, ka dib hawshan ayaa iyadu timaadda midkeed.
Sida billadaha dhaldhalaalka caadiga ah, beddelka daawaha zinc waxay ku jiri karaan illaa afar midab oo dhaldhalaal ah loona qaabeyn karo qaab kasta. Tirada ugu yar ee la dalbado waa 50 kumbiyuutar.
Hore: Dawanka Kirismaska ​​iyo qurxinta